हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको यसरी ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको यसरी ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा !
हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको यसरी ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा !
पौष २५, रुकुम – रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्लीका कृष्ण ओली विद्युत प्राविधिक हुन्। आफ्नो घर खर्च सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिकको रुपमा कार्यतर उनी विगत ७ महिनादेखी थला परेका छन्। कृष्णका अहिले दुवै हात र बायाँ खुट्टा छैन्।
यस्तोछ विष्णु माझीको गुमनाम जिवनको रहस्य, श्रीमाननै वुझ्छन् गीत गाएको पैसा(भिडियो सहित)
भर्खरै आयो सारा नेपालीलाई रुवाउने खबर – पुरा हेर्नुहोस
बधाई छ! रवी लामिछाने र पत्नी निकिता कोरोना मुक्त, रविले भने, सोचे झै कोरोना रैनछ
धनकुटामा बाबुले आफ्नै छोरीको बलात्कार गरेर गर्भवती बनाए